Ithebhulethi yesikolo: yeyiphi oyikhethayo 🥇 yesiphelo. Kwi-intanethi ▷ 🥇
Kumashumi ambalwa eminyaka eyadlulayo ukufunda kwakwanele ukuba zonke iincwadi zesikolo ziboniswe kutitshala; Namhlanje, kwelinye icala, abancinci nabancinci kakhulu abafunda esikolweni nakwisikolo samabanga aphakamileyo kufuneka babe nethebhulethi enye, engaluncedo ekuthatheni amanqaku, ekwenzeni uphando kwiWebhu kunye nokwenza nzulu ezinye zeendawo zokufunda kunye notitshala kodwa nokucwangcisa ngokukhawuleza umgama wesifundo okanye ukufundisisa noogxa bakho ngenkomfa yevidiyo (ebaluleke ngakumbi kwimeko yezithintelo kunye nemida ebekwe ngabasemagunyeni bezempilo.
Kuba u ithebhulethi ibalulekile kwindlela yokufunda yanamhlanje, kwesi sikhokelo siza kukubonisa ezona pilisi zibalaseleyo zesikolo ukuba ungathenga kwi-Intanethi, unokukhetha kuphela iimodeli ezikhawulezayo, ezi-agile, kunye ne-app-ezifanelekileyo eziluncedo kwimfundo. Ukuba sifuna thenga ithebhulethi entsha yesikolo kwivenkile ebonakalayo okanye kwindawo yokuthenga kusoloko kucetyiswa ukuba ujonge kuqala kwiimpawu zobuchwephesha eziphakanyisiweyo, ukunqanda ukuthenga iipilisi ezicothayo, ezingenakwandiswa zokungqinelana okungathandabuzekiyo.
OKUFUNDILEYO FUNDA: Elona cwecwe liphezulu le-Android: iSamsung, iHuawei okanye iLenovo?
Eyona tablet ilungileyo yesikolo
Kukho iipilisi ezininzi ezilungele isikolo, kodwa zimbalwa kuphela ezifanele ukujongwa njengokufundisa. Abanye ootitshala kunye noonjingalwazi baya kumisela iimodeli ezithile zeklasi yonke, soloko ubuza ngaphambi kokuba uthenge into engeyiyo.
Ngaphambi kokuthenga nayiphi na ithebhulethi oza kuyinikela esikolweni, sikucebisa ukuba ujonge ezi zinto zilandelayo:
Inkqubo: Ukuze sikwazi ukuqala zonke izicelo zesikolo kufuneka sigxile kwiimodeli ezine-2 GHz processor-core processor okanye uhlaziyo olugqithisileyo (iinguqulelo ezinee-Octa-core CPUs).
i-ram: Ukuqhuba inkqubo yokusebenza kunye nokusetyenziswa kwezemfundo, i-2GB ye-RAM yanele, kodwa ukuze ukwazi ukuvula nokuba zi-2 okanye ezi-3 izicelo ezinzima ngaphandle kwengxaki kuyacetyiswa ukuba ujonge kwiimodeli ezine-4GB ye-RAM.
Imemori yangaphakathi-Iipilisi zesikolo ziya kugcwalisa ngokukhawuleza amanqaku akhutshelweyo, iincwadana kunye neefayile zePDF, ke kungcono ukuba ubuncinci inkumbulo eyi-32GB kwangoko, nokuba ngcono ukuba inokwandiswa (ubuncinci kwiimodeli ze-Android). Ukuthintela iingxaki zesithuba, sicebisa kakhulu ukudibanisa inkonzo yelifu phi ukugcina iifayile ezinkulu.
IsikriniIsikrini kufuneka okungenani sibe zi-intshi ezi-8 kwaye kufuneka sixhase isisombululo se-HD (ngaphezulu kwama-700 imigca ethe tyaba). Uninzi lweemodeli ziya kubonelela ngezikrini ngetekhnoloji ye-IPS, kodwa sinokufumana kwakhona iRetina (eApple).
Conectividad-Ukuze ukwazi ukunxibelelana nayo nayiphi na inethiwekhi ye-Wi-Fi udinga imodyuli engenazingcingo ye-band-band, ukuze uzuze kwi uqhagamshelo olukhawulezayo lwe-5 GHz. Ubukho beBluetooth LE kubalulekile, ukuze ukwazi ukudibanisa nayiphi na imodeli yeefowuni ezingenazingcingo. Iimodeli ezineSIM kunye nenkxaso yenethiwekhi ephathekayo (i-LTE okanye kamva) zibiza kakhulu nakwimfundo ngowona msebenzi ungafunekiyo.
Iikhamera: Kwiinkomfa zevidiyo kubalulekile ukuba kubekho ikhamera yangaphambili, ukuze ukwazi ukusebenzisa iSkype okanye iZoom ngaphandle kwengxaki. Ubukho bekhamera yangasemva lukhetho olunomdla, kuba ukongeza kwiifoto eziya kuvumela skena amaxwebhu ephepha ukuwaguqula abe yidijithali.
UkuzimelaIitafile zineebhetri ezinkulu kunee-smartphones kwaye zivumela, phantsi kweemeko eziqhelekileyo zokusetyenziswa, ukufikelela ngokukhuselekileyo kwiiyure ezingama-6-7 zokusetyenziswa.
Inkqubo yokusebenza: phantse zonke iitafile esiza kukubonisa zona I-Android njengenkqubo yokusebenza kodwa akufuneki sikujongele phantsi kakhulu IiPads ezine-iPadOS, inkqubo ekhawulezayo, ekhawulezayo kwaye ehlala ifuneka (abanye ootitshala baya kuthi bacele ii-iPads njengezixhobo zokufundisa).
Iimodeli zentengiso onokukhetha kuzo
Emva kokubona kunye ezinye zeempawu ekufuneka ithebhulethi elungileyo yesikolo ifumaneke, masibone kwangoko ukuba zeziphi iimodeli onokuzithenga, ukuqala ngexabiso eliphantsi ukuya phezulu kuluhlu. Imodeli yokuqala esikucebisa ukuba uyiqwalasele njengecwecwe lesikolo yinto entsha Umlilo HD 8, Iyafumaneka kwiAmazon ngexabiso elingaphantsi kwe- € 150 (ngezibonelelo ezizodwa ezisebenzayo).
Kule thebhulethi inexabiso eliphantsi sifumana i-8-intshi IPS HD isikrini, iprosesa ye-quad-core, 2GB ye-RAM, i-64GB yememori yangaphakathi eyandisiweyo, igalelo le-USB-C lokutshaja, ikhamera yangaphambili, ikhamera yangasemva, ukuzimela ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-12 kunye nenkqubo yokusebenza esekwe ngumnini kwi-Android (ngaphandle kweVenkile yokudlala kodwa ngeVenkile yeApple yeAmazon).
Ukuba sifuna iVenkile yokudlala kwithebhulethi yesikolo kwaye senze kube lula ukufumana usetyenziso lokufunda, singagxila kwithebhulethi I-Samsung Galaxy Tab A7, Iyafumaneka kwiAmazon engaphantsi kwe- € 250.
Kwithebhulethi ye-Samsung sifumana isikrini esingu-10,4-intshi ngesisombululo se-2000 x 1200 Pixel, iprosesa ye-octa-core, i-3 GB ye-RAM, i-32 GB yememori eyandisiweyo yangaphakathi, i-band-band ye-Wi-Fi, i-hotspot ezenzekelayo, ikhamera yangaphambili, ikhamera ngasemva, ibhetri engama-7040 mAh kunye nenkqubo yokusebenza ye-Android 10.
Enye ithebhulethi efanelekileyo yokusetyenziswa kwesikolo yile Itheyibhile yeLenovo M10 HD, Iyafumaneka kwiAmazon engaphantsi kwe- € 200.
Kule thebhulethi sinokufumana isikrini esigcweleyo se-10,3-intshi ye-HD, iprosesa yeMediaTek, i-4GB ye-RAM, i-64GB yememori yangaphakathi, i-WiFi + iBluetooth 5.0, idokodo enezithethi zomsindo ezinikezelweyo, umncedisi welizwi odibeneyo we-Alexa kunye nebhetri yeeyure ezili-10. ubude bexesha.
Ngakolunye uhlangothi, ukuba sifuna ithebhulethi ethengiswa kakhulu kwintengiso kuzo zonke iindleko (okanye ootitshala basinyanzela ukuba senze imveliso yeApple),I-Apple iPad, Iyafumaneka kwiAmazon engaphantsi kwe- € 400.
Njengazo zonke iimveliso ze-Apple, iyakhathalelwa iye kwezona nkcukacha zincinci kwaye ine-10,2-intshi yeRetina isibonisi, iprosesa ye-A12 eneNjini yeNeural, inkxaso yePensile ye-Apple kunye nekhibhodi eyi-Smart, ikhamera engasemva ye-8 MP, iWi-Fi ye Ibhendi emibini, iBluetooth 5.0 LE, 1.2MP Ikhamera yeFace FaceTime yevidiyo ye-HD, izithethi zestereo kunye nenkqubo yokusebenza ye-iPadOS.
Ukuba awanelisekanga nge-iPad elula kwaye sifuna iPC encinci ephathekayo ukwenza yonke into, imodeli ekuphela kwayo ekugxilwe kuyo yileI-Apple iPad Pro, Iyafumaneka kwiAmazon engaphantsi kwe- € 900.
Eli cwecwe linomboniso we-11 "onqenqemeni lwe-Liquid Retina ukubonisa nge-ProMotion technology, iprosesa ye-A12Z Bionic eneNjini yeNeural, ikhamera engasemva eyi-12MP, i-10MP ye-engile ebanzi, iskena se-LiDAR, ikhamera yangaphambili ye-7MP ye-TrueDepth, i-ID yobuso , Isandi sesithethi ezine, i-802.11ax ye-Wi-Fi 6 yokusebenza kwenkqubo kunye ne-iPadOS.
Amacwecwe esiwacebise apha ngasentla alungile kuyo nayiphi na ikhosi yokufunda, ukusuka kwisikolo samabanga aphantsi ukuya ekholejini. Nokuba iimodeli ezibiza ixabiso eliphantsi zenza indima yazo kakuhle, nangona kuhlala kucetyiswa ukuba kugxilwe kwi-iPad (xa imeko yezoqoqosho ikuvumela) ukukhanya, isantya sokwenziwa kwezicelo kunye nokuhambelana nezixhobo zemfundo.
Ukuba ujonga iipilisi ngekhibhodi eyakhelwe-ngaphakathi, sicebisa ukuba ufunde isikhokelo sethu Eyona 2-in-1 yeCwecwe-PC enebhodi enokususwa mi Eyona Windows 10 IiLaptops eziguqulwayo kwiThebhulethi. Ukuba kwelinye icala asiwalahli amandla kunye nentuthuzelo yokubhala enikwa incwadana yemveli, sinokuqhubeka nokufunda kwisikhokelo Ezona ncwadana zibalaseleyo zabafundi.
Ingcono iPc okanye uthotho lwePS5 / Xbox?